Global Voices teny Malagasy » “Nahoana No Tian’ny Governemanta Hosimbàna Aminà Toby Famokarana Herinaratra Mandeha Amin’ny Arintany i Krabi ?” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Aogositra 2015 4:50 GMT 1	 · Mpanoratra Wanwadee Erawan Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tontolo_iainana
Vondrom-piarahamonina manao hetsi-panoherana ny tetikasa iray hametrahana toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny arintany ao atsimon'i Thailand. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'ny “Avoty amin'ny Arintany i Andaman”
Maro amin'ireo mponina ao Krabi, faritany iray malaza amin'ny fizahantany any atsimon'i Thailand, no manohitra ny drafitry ny governemanta hanorina toby ahodina amin'ny arintany any akaikin'ny tranon'izy ireo.
Tany ampiandohan'ny 2014 ny Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) – Sampan-draharaham-panjakana mpamokatra sy mpaninjara herinaratra eo ambany fiadidian'ny Ministeran'ny Angovo ao Thailand , dia nandroso hevitra  hanangana toby iray famokarana herinaratra ahodina amin'ny arintany, hanana tanjaka  870 megawatts ao Krabi.
Ankoatra izay, sosokevitra avy aminy ny hanorenana seranana ho an'ny arintany  ao Nuea Khlong, izay mbola ao Krabi ihany koa.
Ampahany amin'ilay drafitry  ny governemanta momba ny angovo, antsoina hoe Drafitra 2010 ho Fampiroboroboana ny Herinaratra ilay asa fanorenana, mba hampitomboana ny famatsiana herinaratra ao amin'ny firenena. Nampitandrina  i Prayuth Chan-ocha praiminisitra fa raha toa tsy tanteraka ilay drafitra dia mety hizaka vidinà herinaratra midangana vokatr'izany ny olom-pirenena Thai.
Tonga dia naneho ny ahiahiny avy hatrany ireo mponina ao Krabi momba ny mety ho fiantraika ratsin'ilay toby famokarana amin'ny tontolo iainana ao an-toerana. Navoitran'izy ireo fa ny fandefasana arintany betsaka sy ny fanorenana seranana goavana dia mety handona mafy/hanimba ny faritra amoron-dranomasina ao Krabi, izay faritra arovana ao anatin'ny fifanarahana RAMSAR.
RAMSAR dia fifanarahana iraisampirenema izay mitily  ireo faritra mando mila arovana mba hitazonana ny fifangaroana samihafan'ny zavamiaina erantany.
Ahian'ireo mponina ihany koa ny hoe mety hanimba ny fahasalaman'ny olona ao an-toerana ihany koa ny arintany. Betsaka ireo vondrona manohitra ilay tetikasa no nilaza fa tsy nisy afa-tsy olom-bitsy monja no nanaovan'ireo mpanohana ilay tetikasa ny fakàna ny hevitry ny vahoaka.
Sarin'ny fanentanana ‘Arovy i Krabi, Tsy mila Arintany’ mampiseho ireo mpanao hetsi-panoherana taminà hetsika fikomiana faobe. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'ny “Avoty amin'ny Arintany i Andaman”
Nilaza  ny mponina iray tao am-bohitra fa tsy nalaina tsara araka ny tokony ho izy ny hevitr'ilay vondrom-piarahamonina:
Tsy nahafantatra akory aza izahay hoe nisy izany fakàna ny hevitry ny daholobe izany nefa dia ho ao ambadiky ny tokotaniko no hanorenana ilay toby famokarana herinaratra, heverinay ho toy ny fihetsiketsehana fotsiny toy ny fampisehoana elefanta izany. Tamin'ilay andiany faharoa nakàna ny hevitry ny daholobe, nofoanan-dry zareo fotsiny ilay hetsika rehefa injay niha-marobe ny olona tonga. Nandritra ilay andiany fahatelo, nisy manamboninahitra efa ho 500 teo, nahemotra indray ilay hetsika, saingy mbola mitoetra hatrany ny ahiahin'ny vondrom-piarahamonina.
Araka ny fitsipiky ny Ministeran'ny Harena Voajanahary sy ny Tontolo iainana, izay rehetra tetikasa famokarana herinaratra manana tanjaka maherin'ny 100 megawatts dia tsy maintsy atolotra hanaovana (EHIA) Fandinihana Ny Ho Fiantraikany Amin'ny Tontolo iainana sy ny Fahasalamana alohan'ny hahazoany fahazoan-dàlana  avy amin'ny governemanta.
Ny 5 Aogositra lasa teo, fikambanana niisa 42 sy olontsotra 52 no nanasonia taratasy iray  nangataka  ny governemanta mba hanajanona ilay tetikasa. Nampahatsiahivin-dry zareo an'ireo manampahefana fa marintoerana ny angovo ao amin'ny faritra ary mbola misy ambim-bava aza ny resaka famatsiana herinaratra. Fitakiana telo no ao anatin'ilay taratasy :
Ahian'ireo mpiaro tontolo iainana handoto ny ranomasina Andaman ilay tetikasa mampiasa arintany. Sary avy amin'ny pejy “Avoty amin'ny Arintany i Andaman”
- Tokony hanao fakàna hevitra bebe kokoa eny anivon'ny daholobe ny governemanta mikasika ny politikan'ny angovo ao amin'ny firenena, indrindra fa ny fampiasàna arintany amin'ny fanorenana toby famokarana herinaratra;
- Tokony haaton'ny governemanta ny antso hanao tolobidy amin'ny fanorenana toby famokarana mandeha amin'ny arintany ao Krabi mandra-piandry izay ho avoakan'ny EHIA; ary
- Tokony hofoanan'ny governemanta ny vokatr'ireo fakàna hevitra tany aloha. Tsy maintsy atao amin'ny fomba mangarahara izay fakàna hevitra manaraka eo.
Nanamafy ihany koa ireo mpanokatra herinaratra ao an-toerana fa misy fomba hafa ankoatry ny arintany, toy ny fampisàna ny angovo azo havaozina . Tian'izy ireo ihany koa ny governemanta mba hiatrika ny tsy fahampian'ny tambajotra izay olana goavana be amin'ny fitsinjaràna ny herinaratra manerana ny firenena.
Tao amin'ny pejiny Facebook, Akradej Chakjinda, mpanentana iray avy ao amin'ny “Avoty amin'ny Arintany i Andaman” nanoratra  momba ny tolon'ireo mponina ao Krabi mba hiarovana ny tsy hahasimba ny tontolo iainan-dry zareo :
Nahoana No Tian'ny Governemanta Hosimbàna Aminà Toby Famokarana Herinaratra Mandeha Amin'ny (fandoroana) Arintany i Krabi ?
Manana vina sy tanjona ny ho tanàna maitso i Krabi. Tian'ireo mponina ao Krabi ho arovana ihany koa ny natiora sy ny tontolo iainana mba hisian'ny fandrosoana maharitr'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana.
Manana safidy i Krabi! Afaka mifanohana isika samy isika amin'ny angovo azo havaozina. Nahoana no hisafidy arintany? Araka izany, tianay ny mba hangataka anareo — mpitia an'i Krabi, hanampy anay hidradradradra ny hoe #‎krabiTsyMilaArintany sy #‎Arovykrabi. Ndeha hataontsika ren'ny governemanta Thai ny feontsika!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/08/25/73400/
 dia nandroso hevitra: http://www.egat.co.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=178
 seranana ho an'ny arintany: http://prachatai.com/english/node/5325
 taratasy iray: http://www.prachatai.com/journal/2015/08/60696